Kanaf, hiriyyummaan karaa hawaassfi polotikaa Oromootaa walitti hidhuudha. Sadarkaa Gadaa kanatti ijoolleen hojii beekamaa hinqaban. Seenas jechichaa illee Itoophiyaa keessa akka hintaane seenaan ni addeessa. Help Center Find new research papers in: Filmaata qondaaloota Gadaarratti yaada ummataa sassaabuudhaan irratti hundeeyfamanii ija filmaata godhamee adda baasanii labsu.
Nabii — Kan abbootiiti. Sirna hawaasaa guutuu ture jechuudha. Yeroo tochoonu, ilmi hangafni bakka itti dhalateetti hafa. Hambisaan duula gurguddaa Shawaa keessatti haa godhu malee, Amaara dhiibuu hin dandeenye. Galaawudoos humna Habasha gurmeesse ofirraa ittise. Manguddoota lammii keessaa ammoo, kan warra hangafaa hunda dursu. Lammiin affaariifi Saahoon dura godaanuu waan jalqaban fakkaata. Gujii keessatti — waggaa Gadaa tti e.
Ormoon waan tikfattee tureef qabeenya dhuunfaa loon senaa tahe malee, lafti qabeenya gamtaa ture. Hawaasa keessatti paartiileen uumamtu turan jechuudha.
Bara dhihoo dura akka waliin turan, afaan isaanii walitti seenuun ragaa nitaha. Isaan keeessaa, ayyaanootni beekamoon kabajamuun waan jiraatani. Seenaa qabsaayaa fi goota Oromoo Dr Senaa Nagoo. Bara Muudana kana seera jajjabaa lama tumatan. Raaboonni yeroo itti ilmaan kormaa Raaba tahan jedhamu, waggaa jiddutti. Eegaa, kun aadaa amantii sirna Gadaa keessaa isa tokko.
Ituu keessatti Raaba jedhama. Isaaniis bakka garagaraatti maqaa adda addaa qabaatu. Dabballoomanii sadarkaa Gadaa isa dura ilmaan kormaa akka dhalataniin itti seenaniidha.
Sababootii godaansaa uuman akkuma biyya sanaafi haala yeroo sanaarratti hudeeyfama. Jechuun adaba namarratti seeraan dabru malee, waan halaba out-casted aeenaa taasisan jiru. Boorana, Gujiifi Arsii keessatti ammoo, isa jahaffaadha. Lakkooysi yeroo, aadaan, amantiin, jireenyi hawaasaa, ittisi biyyaafi kkf hundi hidhata Gadaa qabu, fakkeenyaaf sadarkaalee Gadaa, goggeessa Gadaa, abaluu abaluu. Marii seeraafi heeraarratti argamanii akka seerriifi heerri Gadaa kitaabs dabneef gorsuufi qajeechuudha.
Sirna Gadaa keessattiis ummanni Oromoo aadaa walii galatti bifa armaan olii qabaatu akka qabu, aadaa kanarraahiis qaroomni ummata Oromoo kalandara mataa isaa qabaachutti akka geesse hubanna.
Booran keessatti — Gaammee Gurguddaa jedhamu b. Ummatni kamiyyuu ni sossoha, bakka takka gadhiisee bakka biraatti ni godaana. Akkaataan dagaagina hawaasaa dhala namaa kamiyyuu sirna keeessa dabru niqaba. Gujii keessatti — Doorii jedhamu.
Akka aadaan sirna kanaa hin dabnefi seerriifi heerri sirnichaa hin banne qaceelcha. Gurmuu kanaan akkaataan jiruufi jireenya dhala Oromoo hundaatu keessatti murtaawa.
Sadarkaalee Gadaa garagaraakeessatti ilmaan Oromoo dirqama dalagaa adda addaatu isa eeggata.
Yeroo itti warri Gadaan isaanii geessee biyya bulchan, seera ilaalan, ooromoo Gosaa furaniidha. Marsaan Gadaa naannawutti seenaq fidee ijoolleefi jaarsoolii hiriyyaa taasisaa. Waraanni saa harka loltuu Oromoorratti akka dhadhaa baqee dhume. Birmajiin Wallo Bagamidir seenanii Amaaroota hedduu fixan. Gaaffi kana deebisuuf, nama Goggeessa Gadaa isaatiin Gadaa keenya jedha.
Osoo gaarri, hoqiifi hallayyaan hinjiru tahee, namni hafu hinjiru jedhaa ture barreeysaan Habashaa Alaqaa Atsimeen. Eega, bakka heddutti Marsaan Gadaa waggaa 40 akka qabaatu olitti ilaalleerra. Dalagaa kana fi kana fakkaataniin akka sesnaa amantii Waaqatti amanuufi hordofu godhu; ummataafi Waaqa walqunnamsiisu. Qaallitiiniis akkuma qaalluu kabajamtuudha. Gartuuleen kun aadaadhaan hangafaafi quxxusutti beekamu. Haaluma qoodama gosa keessa duraan tureetu Sirna Gadaa keessattiis ga-dhaabbate jechuudha.
Qaalluun gosa beekamaa keessaa haa bahu malee, tokko qofa taha jechuumiti. Oromoonni karaa Qaalluu Waaqaan walqunnamuu malee, akkaataa biraas niqabu. Lubni hundi duula akka duuluufi laf haaraya baasan malee, meendhicha akka hin hidhanne kan jedhu ture. Lolli sun guyyaa kudhalama deeme.
Bara Gadaa Melbaa kana Oromoon abbaa duulaa itti ijaaree yeroo duraatiif gurmuun duulutti bobbaase. Garuu yeroo dheeraa keessa tahuun hinmamu. Ayyaana buttaa malee, kanneen sirna kana fakkaatanii maqaa mataa isaanii qaban sadarkaa oliiti dhaabbata tahanii yeroo beekoomaatti kabajaman hedduudha.
Guyyootii jiraniif maqaa 27tu jira.